रवी लामिछानेसंगै पार्टी गर्ने दीपकराज गिरिले दिए पार्टी गर्नुको जवाफ - Filmy News Portal Of Nepal
अहिले सामाजिक संजालमा रवी लामिछाने ; कलकार दीपकराज गिरि लगायत अन्य चर्चित कलकारहरु लालमोहन बनाएको र पार्टी गरेको भिडियो अनि तस्बिर बाहिर सार्वजनिक भएपछी धेरैले कमेन्ट र शेयर गरेका छन् । सोही कुरा सहन नसके पछि आलोकाचो जवाफमा दिपकले ल्व्खेका छन् कि राहर बाडेको फोटो भिडियो मिडियाले छापेन वा अहेयर गरेन तर पार्टी गरेको छाप्यो भनेर। के यो अल्लारे बुद्धिको जवाफ भएन? सेवा गरे भन्दैमा पार्टी गर्ने छुट भए धेरैले सेवा गर्दै आ आफ्नो ब्यबसाय वा जिबिकोपार्जन गर्ने बाटोतिर सबै लम्किन्थे हैन र दीपक जि? हेरौ दीपकले आफ्नो फेसबुक स्टाटस मार्फत के लेखेत? त्यो कुरा नि सार्वजनिक गरौ। नत्र यो चै गरेन फिल्मी पत्रकारले भन्ने गुनासो हटाउ।
जति बेला काठमान्डौमा लकडाउन केहि खुकुलो भएको थियो सडकमा मज्जाले गाडिहरू गुड्न थालेका थिए अनि हामि चलचित्रकर्मीहरू अनुरागजीले बितरण गरेको एक राहत कार्यक्रम मा सहभागी भयौ दिनभर भोकाएका थियौ, पसलहरू बन्द थिए अत
जहां सम्म रबी लामिछाने जी को कुरा छ , उहॉ लाखौ नेपालीहरूको आशाको केन्द्र हो , अत: उहॉ माथिको प्रहार गलत छ र त्यो आरोप मा एक रत्ती सत्यता पनि छैन।
त्यो दिन पनि मैले कल गर्दा उहॉ आउन चाहनु भएको थिएन, एक त धेरै लामो समय देखि हामि भेटेका थिएनौ
त्यहि वेला ३४ जना नयॉ संक्रमित थपिएको समाचार आयो, रबिजीले नै भन्नु भयो “ ओहो अबस्था फेरीयो अब छुट्टिनु पर्छ अब हामि भिडियो च्याट मैं कुरा गरौला “उहॉ निस्कनु भयो । हामि पनि घर आयौ….मसला नभएको कथा चाहि यहि हो !!! तैपनि हामि बाट एउटा गल्ति चाहि भयो